पर्यटन प्रवद्र्धनमा स्वदेशी विमान
नेपालीमा एउटा उखान छ माल पाएर मात्र हुँदैन चाल पाउनुपर्छ । हामीले पर्यटनका पर्याप्त क्षेत्र भएर पनि त्यसको पूर्ण उपयोग गर्न सकेका छैनौँ कि ? नेपालको पुराताìिवक ऐतिहासिक महìवका वस्तुदेखि साहसिक पर्यटन क्षेत्रका प्रसस्त क्षेत्र छन्, तिनीहरूको पूर्ण उपयोग गर्न सकिएको छ त ? निश्चय नै उत्तर नकारात्मक आउँछ । दुईतिर आर्थिक रूपले प्रबल दुई राष्ट्र छन्, त्यहाँको जनसङ्ख्या र त्यसमा पनि पर्यटनमा जानेको सानो अंश मात्र नेपालमा ल्याउन सकियो भने पर्याप्त हुन्छ । भारत धर्मनिरपेक्ष भनिए पनि त्यहाँको ठूलो जनसङ्ख्या हिन्दुहरूको छ – नेपालमा हिन्दुहरूले रुचाउने र दर्शन गर्न जानुपर्छ भन्ने खालका थुप्रै मन्दिर छन । हालै उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्रीले मानसरोवर यात्रामा जानेलाई एकलाख भारतीय रुपियाँ दिने निर्णय गरेका छन् । तमिलनाडुकी मुख्यमन्त्री जयललिताले केही वर्षअघि मुक्तिनाथ जान चाहनेलाई १० हजार भा.रु. दिन थालेकी थिइन । उनको मृत्यु भइसके पनि आगामी सरकारले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने छन् । हिन्दु तीर्थयात्रीले पनि नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा ठूलो योगदान पुग्नेछ । यसलाई बुझेर नै नेपाल वायुसेवा निगमले भारतको तीन गन्तव्यमा आफ्नो नियमित उडान गर्दै आएको छ । अरू विमान कम्पनीको तुलनामा नेपाल वायुसेवा निगम सस्तो भाडा भएकोले सिट कसरी गर्ने भन्ने समस्या छैन । नेपालबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा सकारात्मक सोच रहेको छ । बेलायती प्रकाशन रफ गाइडले सन् २०१७ मा भ्रमणका लागि आकर्षक दश मुलुकमध्ये नेपाललाई दोस्रो नम्बरमा राखेको छ । यसअघि २०१६ मा प्रकाशित पर्यटनसम्बन्धी गाइडबुक लोन्ली प्लानेट विश्वका आकर्षक गन्तव्यमध्ये नेपाललाई पाँचौं नम्बरमा राखेको थियो तर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आकर्षण गर्न आवश्यक पूर्वाधारको विकासमा के ग¥यौँ त भनेर सोच्दा सकारात्मक अवधारणा देखापर्दैन ।
जलस्रोत र पर्यटन नेपालको तुलनात्मक लाभका क्षेत्र हुन् । त्यसमा पनि पूँजीगत हिसाबमा जलास्रोत क्षेत्रको उपयोगका लागि ठूलो लगानी आवश्यकपर्ने भएकोले पर्यटन उद्योगको प्रबद्र्धनबाट तुलनात्मक रूपमा बढी लाभ हासिल गर्न सकिन्छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको दुईदेखि तीन प्रतिशत योगदान रहेको यस क्षेत्रको दिगो विकास हुन सकेमा अपेक्षित लाभ लिन सकिन्छ ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार सन् २०१५ मा नेपाल आउने पर्यटकको बसाइँ औसत १३.१ दिन र प्रतिव्यक्ति औसत खर्च ७० अमेरिकी डलर रह्यो । भूकम्पपछि ४० प्रतिशत पर्यटक घट्ने प्रक्षेपण भए पनि ३२ प्रतिशतमा मात्र सीमित रहेबाट सङ्कटकालीन अवस्थामा समेत यसप्रति राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र विश्वास कायमै रहेको देखिन्छ । सन् २०१५ को तुलनामा सन् २०१६ मा पर्यटन आगमन सङ्ख्यामा २४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । भ्रमण वर्ष मनाउने औपचारिकताभन्दा व्यावहारिकता चाहिन्छ । मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि पर्यटन महìवपूर्ण विकल्पसमेत हुनसक्छ । नेपालले बर्सेनि ठूलो मात्रामा व्यापार घाटा व्यहोर्दै आएको छ । चालू वर्षमा यस्तो व्यापार घाटा लगभग सात अर्ब पुगिसकेको परिप्रेक्ष्यमा यस्तो व्यापार घाटा पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धनमार्फत पूर्ति गर्न सकिन्छ । सन् १९९८ को नेपाल भ्रमण वर्ष, सन् २०१२ को लुम्बिनी भ्रमण वर्ष, सन् २०१३ को सिस्ने जलजला ढोरपाटनले पर्यटन आकर्षणमा महìवपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । भविष्यका लागि थप योजना ल्याइएको छ जसअनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सन् २०२५ सम्ममा वार्षिक २५ लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना सार्वजनिक गरेको छ । पर्यटन प्रवद्र्धनमा आधुनिक विमानस्थलको सुविधाले पहिलो छाप छाड्छ । त्रिभुवन विमानस्थलले नथेग्ने मात्रामा यात्रुको सेवा गरिरहेको छ । यसरी धेरै दिन चल्दैन भनेर भैरहवा र पोखरामा मध्यमखालका विमानस्थलको निर्माणतिर विशेष अभिरुचि देखाइएको छ भने दीर्घकालीन रूपमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलको परिकल्पना गरिएको छ । हाम्रा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण गति हेर्दा कति वर्षमा पूरा गरिएला भन्न सकिँदैन ।
सानो लगानीमा धेरै सम्भावना भएको सबैभन्दा छिटो विकास हुन सक्ने उद्योग हो पर्यटन । यसलाई सकारात्मक गति र दिशा दिन हामीले पर्यटनलाई विशेष रूपमा राख्न सक्नुपर्छ । नेपाल असुरक्षित गन्तव्य हो भनी विदेशी पर्यटकमा परेको भ्रम हटाउन प्रचारात्मक प्रयास हुनुपर्छ । पर्यटन विकासका लागि नयाँ गन्तव्य खोजी गर्नुपर्छ । पर्यटकीय रूपमा सम्भाव्य ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालन हुँदै आएका होमस्टेजस्ता कार्यक्रम लाई प्रोत्साहन दिनु जरुरी छ । पर्यटन क्षेत्रको विकासबाट प्राप्त लाभ न्यायोचित रूपमा वितरण गर्न पर्यटन क्षेत्रको विविधीकरण र विस्तार हुनु पर्छ । यिनै परिप्रेक्ष्य विचार गर्दा पर्यटन प्रर्वद्धनका लागि साधनको रूपमा पर्याप्त विमान हुनुपर्छ । कुनै बेला २१ वटासम्म विमान उडाउन सक्षम नेपाल वायुसेवा निगम निकै खुम्चियो । तर अहिले आएर केही सकारात्मक सङ्केत देखा परेका छन् भने आउँदो वर्ष दुईवटा वाइड्बडी विमान थपिने छन् । आफ्नो देशको विमानले मागअनुसार सेवा दिन नसकेसम्म पर्यटन प्रवद्र्धनमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकिँदैन । त्यसैले विमान थप्ने र पूर्वाधार विकास गर्ने काम एकसाथ गर्नुपर्छ ।